Nlekọta nke ala PVC! - Akụkọ-Topflor China nwere oke
Echiche:73 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-07-13 Mmalite: Saịtị
Site na mmụba nke ojiji nke ala PVC, nsogbu ndozi nke ala PVC apụtawokwa nke ọma. Ọtụtụ nkeji ejirila ego buru ibu na ngbanwe ala PVC. N'ihi enweghị ọkachamara mmezi ihe ọmụma, mmezi mmetụta adịghị anya. Nhazi oge na-ezighi ezi ga-eme ka ala PVC belata gloss, gbanwee edo edo, gbanwee oji, agbaji, wdg, site na mmetụta a tụrụ anya ya, ma metụta iji ya eme ihe kwa ụbọchị.
1. Nzube nke ihicha na ndozi:
1) Imeziwanye ọdịdị: wepu oge unyi emeputara na ojiji kwa ụbọchị, nke mere na ala PVC nwere ike igosipụta ọdịdị ya pụrụ iche na gloss eke.
2) Chebe ala: kpuchido ala PVC site na kemịkalụ na-enweghị ihe ọghọm, akara sịga, mbipụta akpụkpọ ụkwụ, mmanụ na mmiri, wdg, iji belata nkedo nke elu ahụ, ka e wee nwee ike ịdịte aka nke ala n'onwe ya, yabụ na-agbatị ala Ọrụ ndụ.
3) Nlekọta dị mma: N'ihi usoro nkwekọrịta dị elu na ọgwụgwọ pụrụ iche nke ala PVC n'onwe ya, attentionaa ntị na nhicha na ndozi kwa ụbọchị, nke nwere ike ime ka ala dịkwuo mfe ilekọta ma gbasaa
2. Nlekọta ndị nọọsụ:
1) A ga-ewepụsị unyi niile dị n ’ala n’oge.
2) A machibidoro ya kpamkpam imikpu ala na mmiri mmiri. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ihe mgbakwasị ụkwụ na-eji gluu na-enweghị mmiri iji belata mmiri (dị ka ala mmiri, ime ụlọ mmiri, wdg), imikpu n'ime mmiri ogologo oge ga-emetụta ọrụ nke ala. N'ime usoro nhicha ahụ, jiri igwe mmiri na-amịpụta nsị mmiri n'oge.
3) A machibidoro ya iwu iji akụrụngwa nhicha siri ike (dị ka bọọlụ nchara, padịlị pị, wdg) iji gbochie ihe dị nkọ ịkụ ala.
4) A na-atụ aro ka etinye pad pad na ọnụ ụzọ nke ebe ọha na-eji okporo ụzọ dị elu iji gbochie unyi na aja ịbata n'ime ala.
3. Usoro mmezi na ọkwa dị iche iche:
(1) Nhicha na mmezi mgbe ịtọgbọ ala / tupu ojiji
1. Buru ụzọ wepu uzuzu na irighiri ahihia n’elu ala.
2. Jiri nhicha ụlọ iji tinye diski abrasive na-acha uhie uhie ma ọ bụ ngwaahịa ndị yiri ya iji mee ka ọ dị ọcha na obere ọsọ iji wepụ griiz, uzuzu na unyi ndị ọzọ n’elu ala, ma jiri igwe mmiri na-amịpụta mmiri nsị.
3. Saa na mmiri dị ọcha wee hichaa ya.
4. Dị ka mkpa, ị nwere ike isi tinye 1-2 n'ígwé nke dị elu-ike ọdịdị ihu wax.
Ngwaọrụ: grinder acha uhie uhie abrasive diski mmiri na-amịpụta igwe wax, kwoọ mmiri mmiri, onye na-ehicha ala
(2) Ihicha na mmezi kwa ubochi
1. Kpuo ájá ma ọ bụ kpochapụ ájá. (Gbanyụọ onye na-ahụ maka ájá n'ala, kpoo ya ma mee ka ájá dị.)
2. Wet ịdọrọ. (Ghichaa 1:20 na mmiri n'elu ala na-ehicha ma jiri mmiri na-ehicha ala.)
Nhicha gị n'ụlọnga: n'ala dọrọ ájá gị n'ụlọnga n'ala ihicha
Ngwá ọrụ: ájá push mop
(3) Ime nhicha na mmezi ya mgbe niile
1. Kpuo ájá ma ọ bụ kpochapụ ájá.
2. A na-agbanye mmiri nhicha nke ala na mmiri na 1: 20, mopping ma ọ bụ na-ehicha ya na igwe na-agbazi ọsọ ọsọ na diski abrasive uhie.
3. Tinye akwa 1-2 nke akwa dị elu nke dị elu.
4. Dị ka mkpa, ọ nwere ike na-arụkọ ọrụ na elu-ọsọ polishing igwe plus ọcha polishing na mpe mpe akwa polishing ọgwụgwọ.
Cleaner: Ime ụlọ ihicha Polish elu-ike elu elu wax
Ngwaọrụ: pushjá push grinder uhie ọcha ọcha abrasive diski mmiri absorption igwe wax mop
4. Ọgwụgwọ unyi pụrụ iche:
1) Mgbu mmanụ: mmanụ mmanụ dị na mpaghara, wụsa ihe ngwọta ngwaahịa degreaser siri ike ozugbo na akwa nhicha ahụ; maka nnukwu ebe mmanụ stains, gbanye degreaser ahụ dịka 1: 10, wee jiri ihe nhicha ala na mpempe akwụkwọ na-acha uhie uhie na-ehicha na obere ọsọ.
2) Black dechapụ ebi akwụkwọ: iji ịgba nhicha na mmezi wax na elu-ọsọ polishing igwe plus ọcha polishing na mpe mpe akwa polishing ọgwụgwọ. N'ihi na ogologo oge nwa dechapụ ebi akwụkwọ, ị nwere ike wụsa na ike dechapụ remover na na towel na hichapụ ya.
2) Gluu ma ọ bụ chịngọm: jiri ọkachamara na-ewepụ ihe ike iji wụsa na towel iji wepụ.